News Collection: रेजिनाको चिन्ता
नायिका रेजिना अहिले निक्कै चिन्तामा छन्, चिन्तामा नहुन पनि किन ? चर्को घामले रेजिनाको पाखुरा, गर्धन, ढाड, पिंडुला सबै डढेका छन् । डढेका छन् भन्नुको मतलव पोलेर घाउ नै भएको त होइन तर पुरै शरिर चर्को घामले कालो भने भएको छ ।
नायिकाको शरिर गोरो हुनुपर्ने कालो भएपछि चिन्ता त पर्ने नै भयो । यही चिन्ताले २५ दिनको आउटडोर सुटिङ सकेर रेजिना काठमाडौं आइन् । चम्पा चमेली फिल्मको धादिङमा सुटिङ गरेर फर्किएकी रेजिनाले अब फेरी वीरगञ्ज जान पर्ने भएको छ । वीरगञ्जको चर्को घाममा रेजिनाले प्रेम विवाह फिल्मको सुटिङ गर्नेछिन् ।
वीरगञ्जको गर्मीमा फिल्म सुटिङ गर्दा के हाल हुने हो त्यही चिन्ताले रेजिनालाई दिक्दार बनाउन थालेको छ । तर पेशा नै त्यस्तो भएपछि घर भित्र बस्छु भनेर त कहा हुन्छ र रेजिना ? त्यसमाथि दर्जनौं ब्राण्डका लोशन र क्रिम बजारमा पाइन्छन्, त्यसको पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो नि रेजिना ।